प्रा. लालु पौडेल - कान्तिपुर समाचार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही साउन ५ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनायो । कलेज स्थापना गर्न सहयोग गर्ने केही चन्दादाता सम्मानित भए । लामो समय सेवा गर्ने शिक्षक कर्मचारीले दीर्घसेवा पदक प्राप्त गरे । तर कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीमा वार्षिकोत्सवको हर्षभन्दा त्रिविको भविष्यप्रति चिन्ता थियो ।
विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानबाट समृद्धि
समृद्ध नेपाल मुख्य राजनीतिक पार्टीको साझा एजेन्डा बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्ममा नेपाल समृद्ध तथा मध्यम आय भएको देशको रूपमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य राखेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले (त्रिवि) चार वर्षअघि स्नातकोत्तर तहमा लागू गरेको सेमेस्टर प्रणाली अहिले उपत्यकाका सबै क्याम्पसमा विस्तार भइसकेको छ । विज्ञान विषयमा गत वर्षदेखि नै उपत्यका बाहिरसमेत अध्यापन सुरु भइसकेको छ ।
प्रा. लालु पौडेलका लेखहरु :